Linux Mint 19 ichanzi "Tara" | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yemabhenefiti akakura eLinux ndeyekuti ecosystem yayo yakakura kwazvo. Kusiyana nemamwe masisitimu maviri akakosha (MacOS neWindows), muLinux tinogona kuwana zvakasiyana zvakagoverwa kumabasa senge bhizinesi kana kuyedzwa kwekuchengetedza.
Kumwe kwekugovera kwakakosha hapana mubvunzo Linux mint, unofarirwa nevashandisi vazhinji kuti uve akatsiga, kuve shamwari kune avo vachangobva kuchinja masisitimu, asi vachichengetedza mweya wakasununguka unoratidza Linux.
Mavhiki mashoma apfuura takakuudza izvozvo Linux Mint 19 uye LMDE (Linux Mint Debian Edition) vatotanga kukura kwavo takabatana naClem Lefebvre uye chakakosha chikamu cheichi chiitiko kusarudza zita rake. Nhasi tatova nayo uye hapana chimwe chiri pasi pe Tare.
Ichi chichava Linux Mint 19 Tara
Lefebvre pachake akataura kuti chikonzero sisitimu inonzi "Tara" ndizvozvo Iro zita rinonyanya kufarirwa muIreland uye timu yacho inoda chaizvo kurira kwayo.
Kunze kwezita tinoziva kuti kukura kwe Linux Mint 19 Tara Iyo ichangotanga uye zvidiki zvidiki chete zvinogona kupihwa:
Linux Mint 19 inotarisirwa kuburitswa muna Chivabvu kana Chikumi wegore rino, kunyangwe mune izvi pangave pasina chinhu chakasimbiswa
Linux Mint 19 yakavakirwa paUbuntu 18.04 LTS uye rutsigiro rwayo runogara kusvika 2023
Linux Mint 19 inoshandisa GTK 3.22, yakagadzika vhezheni yeGTK3 uye default graphical interface.
Linux Mint 19 Tara ichave shanduko huru yeLinux Mint sezvo ichizoshandisa iyo nyowani Ubuntu LTS kodhi iyo, sekuziva kwedu, ine akawanda maficha maficha.
Zvishoma nezvishoma zvishoma ruzivo rweLinux Mint 19 Tara ichaburitswa, kunyangwe tichiziva kwazvo basa reboka rinotungamirwa naLefebvre uye isu tinoziva pachine nguva kuti ichave yakanaka kuvhurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint 19 ichatumidzwa "Tara"
Mario R. Gonzalez akadaro
Ndinoda kuziva kana dambudziko rekurembera iro sisitimu riinaro paunotamisa mafaera mahombe kune pendrive inoramba ichiramba ndinoda linux mint zvakanyanya asi nekuda kwedambudziko diki iri randiri kushandisa xubuntu inovawo kwandinofarira kugovera se linux mint .
Pindura kuna Mario R. González
Kune mamwe mavhezheni, ini ndaona kuti kuteedzera faira kune pendrive ne linux mint kunodhura zvakanyanya kupfuura mamwe distros. nekuti? Zvakanaka, ini handizive asi ini ndaisa mamwe ma distros uye kuteedzera mafaera anokurumidza.
Pindura kuna fred
Linux Mint, 19 ichatumidzwa TARA rimwe zita rechikadzi., Anoda kurodha pasi uye kuti rinomira rakasimba.
ZVINGAVE ZVAKANAKA KANA VAKANGANISA MAWadhi EWIFI, VANOGONESA CHETE uye VANOFANIRA KUTANGISWA KUTI VASHANDE NEZVIMWE CHINHU PANENGE LINUX YAKABUDA MUZWI RINOZVIMBIRA ROTOBOTI TINODA CHIMWE CHINOKOSHA NEZWI RINOTI TINODZIDZA
Zvingave zvakanaka kana vakagadzirisa kadhi reWi-Fi iro rakatemwa roga kuti vakwanise kuvamisa ivo zvakare chinhu cheizwi hachisati chave kumberi mune icho